«Majy, kintana, fiarahabana, tolotra… tandidona avokoa »
Migadona indray ny taona vaovao eo anivon’ny fiaraha-monina fa mitohy hatrany kosa ny taona litorijika eto anivon’ny Ekar. Miroso amin’ny alahadin’ny Epifania isika. Mitohy hatrany koa ny fiaraha-miasa amin’ny ekipan’i Lakroan’i Madagasikara. Ankafaliana no hanolorana antsika ny fiarahabana tratra ny taona vaovao 2021. Hitondra soa sy fanambinana ho an’ny isam-batan’olona sy ny tokantrano tsirairay ary ny ankohonam-pinoana ity taona ity. Ho taona zina eo amin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly.
« Fianakaviana mifankatia, lanitra ety an-tany… »
Mitohy hatrany ny fiarahantsika eto amin’ny www.lakroa.mg sy ny ekipan’i Lakroan’i Madagasikara. Indro famoaboasana ny tenin’ny Soratra Masina ho an'ny alahady 27 desambra 2020, fetin'ny Fianakaviana Masina. Natao hanampy anao hivelona ny finoana amin'izao alahady fahefatra amin'ny Fiaviana izao. Entina mamarana ny taona 2020 ary handraisana ny taona vaovao 2021. Koa samia ho tahin’Andriamanitra e.
Hafatry ny Arsevekan’Antananarivo
Tanteraho ireo voalazan'ny Soratra Masina mahakasika ny fahamendrehana
Mampita hafatra mifono fampianarana ho an’ny kristianina katolika, indrindra ireo ao amin’ny faritra iandraiketany ny Arsevekan’Antananarivo, Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona. Toa izao ny hafatra manontolo.
« Ny hevitr’Andriamanitra tsy hevitsika »
Mitohy hatrany ny fiarahantsika eto amin’ny www.lakroa.mg sy ny ekipan’i Lakroan’i Madagasikara. Indro famoaboasana ny tenin’ny Soratra Masina ny alahady 20 desambra 2020. Natao hanampy anao hivelona ny finoana amin'izao alahady fahefatra amin'ny Fiaviana izao. Entina mamakivaky herinandro vaovao ihany koa. Koa samia ho tahin’Andriamanitra e.
« Mifalia fa akaiky ny Tompo. »
Mitohy hatrany ny fiarahantsika eto amin’ny www.lakroa.mg sy ny ekipan’i Lakroan’i Madagasikara. Indro famoaboasana ny tenin’ny Soratra Masina ny alahady 13 desambra 2020. Natao hanampy anao hivelona ny finoana amin'izao alahady fahatelo amin'ny Fiaviana izao. Entina mamakivaky herinandro vaovao ihany koa. Koa samia ho tahin’Andriamanitra e.
Laretirety nataon’ny TVP
Sarobidy lavitra noho ny aina ny finoana
Haja il y a 11 mois
Fikambanana masina manomboka miroborobo eto Madagasikara ny Teny Velona Voasoratra ao am-Po (T.V.P). Loharano tsy ritra mamelombelona azy ny Baiboly.